Sevha mapeji ewebhu ekuverenga pasina, nyore uye nekukurumidza | Linux Vakapindwa muropa
Masikati ano taburitsa chinyorwa chaitaura nezvacho Bookworm, inonakidza kwazvo e-bhuku muverengi weLinux. Isu tapedza chinyorwa sejee tichiti ine mhosho yekusaverengera kuverenga iyi blog, kunze kwekunge isu tikachengeta chinyorwa kuti tiverenge is offline. Kune vanhu vazhinji vanofarira izvi, mukugona kuverenga zvinyorwa zvisiri pamhepo, uye vazhinji vacho havazivi kuti sei chengetedza mapeji ewebhu kuti uverenge gare gare, kwete pasina kuvimba neinternet. Muchikamu chino tichakudzidzisa nzira dzakareruka.
Nekuti hongu, kune zvinowedzera zvakaita Dhonza kuti Uchengetedze yeFirefox, asi ini handisi munhu mukuru wekuisa software kana zvisina kunyatso kudikanwa. Uyezve, mabhurawuza akaita seMozilla anotibvumidza kusevha mapeji ewebhu nenzira dzakasiyana "kunze kwebhokisi", ndiko kuti, nekutadza. Imwe yemaitiro iri nyore zvekuti zvinoshamisa. Iyo imwe, zvakare yakapusa, iri tumira peji rewebhu kune PDF, chimwe chinhu chatinogona kuita kubva kudhinda menyu.
1 Sevha mapeji ewebhu nekukwevera iwo kudesktop
2 Tumira kunze webhusaiti kune PDF
3 Kopa uye unamate muMunyori
Sevha mapeji ewebhu nekukwevera iwo kudesktop
Iyi nzira ndiyo yakapusa, asi haishande mune ese mashandiro masystem / giraidhi nharaunda. Hongu zvinoshanda Plasma + Firefox, uye haigone kuve nyore uye nekukurumidza:
Maitiro acho akafanana atinoshandisa kusevha URL mubhukumaki bar. Nhanho yekutanga ndeyekuomaka iyo URL.
Iine iyo URL yakasarudzwa, tinodzvanya pairi uye tinokwevera iyo URL kudesktop.
Mune dzimwe nharaunda kwazvinoshanda, isu tinongoregedza. MuPlasma, uko kune zvakasarudzika sarudzo, tinosarudza "Kopa pano". Izvo iwe zvauchachengeta ichave iri gwaro reHTML, asi yakapusa imwe isina maforodha kana gumi nemaviri emafaira.
Kuti tivhure, tinogona kudzvanya pairi uye ichavhura muiyo default browser. Imwe sarudzo ndeyekuivhura mune yemavara edhita, senge LibreOffice Munyori, asi izvo zvatichaona mune ino kesi hazvizove zvakakwana sekunge tinoivhura nebrowser.
Maitiro akafanana neaya kuenda ku menyu «Sevha se ...» uye chengetedza iyo peji rewebhu seHTML, asi mune ino kesi ichagadzira iyo HTML faira pamwe nefaira izere nemafaira atisingakwanise kudzima kana tichida kuti zvinhu zvese zvioneke zvakakwana. Kuti uwane zvakafanana, chengetedza iyo peji se "Webhu peji, HTML chete" (muFirefox).
Tumira kunze webhusaiti kune PDF
Imwe sarudzo yandaitaura nezvayo inoshanda pane chero sisitimu inoshanda, chero chero webhu saiti uye mausingafanire kuisa chero chakawedzera chiri tumira peji rewebhu kune PDF. Maitiro acho ari nyore:
Iine peji rewebhu ratiri kuda kuchengetedza rakavhurika, tinoenda kusarudzo dzokudhinda. MuFirefox uye Chrome iri mu "Dhinda" sarudzo yatinozoona mu "hamburger" kana matatu matatu. Muzviitiko zvese izvi, iyo pfupi nzira yebhodi ndeye Ctrl + P.
Iye zvino tinofanirwa kusevha peji racho sePDF. MuChromium iri nyore, sezvo iri iyo sarudzo inoratidzika yakamisikidzwa nekutadza uye isu tinongofanira tinya pa «Sevha» imwezve nguva. MuFirefox zvakafanana, chero bedzi tisina chero yakabatana purinda: muchikamu chemaprinta, tinosarudza "Dhinda kune faira" uyezve "Dhinda". Nokusingaperi, iyo faira inochengetwa se mozilla.pdf mune yedu yega folda.
Kopa uye unamate muMunyori
Imwe nzira yakapusa ndeiyi teedzera iro peji rese uye unamate mune inoenderana mameseji edhita ine mifananidzo, hyperlinks, mafonti, nezvimwe. Tinogona kuzviita nekutevera nhanho idzi:
Pa peji rewebhu, tinodzvanya Ctr + A kusarudza zvese.
Tevere, tinodzvanya Ctrl + C kuteedzera iyo peji rewebhu.
Isu tinovhura, semuenzaniso, LibreOffice Writer, yakaiswa nekumisikidza muzvakawanda zvekugovera kweLinux.
Tinodzvanya Ctrl + V kunama peji rewebhu.
Bhonasi: izvo zvatinozowana neiyi nzira zvinogamuchirwa, nehurema iyo mifananidzo inogona kunge yakakura kwazvo uye kuti isu tichaona bhokisi rakakomberedza zvese zvese, asi isu tinokwanisa kugadzirisa izvo zvatinoda kubva kuMunyori mumwe chete. Kana tangova nazvo kune zvatinoda, tinochengeta iyo faira. Kana tikazvitumira kuPDF, zvatichawana zvinopfuura zvinogamuchirwa. Kana isu tichifarira chete chinyorwa pasina mafrills, tinogona kugara tichiita zvinotsanangurwa nenzira iyi kubva kumuverengi maitiro ebrowser.
Iyo yakanyanya kunaka sarudzo, nguva dzose uchifunga kuti Hatidi kuisa imwe software kana kuomesa hupenyu hwedu zvakanyanya, ndeyekutengesa iwo mapeji kuPDF kubva kune imwechete browser. MaPDF anowirirana nemhando dzese dzevatariri vemagwaro uye e-mabhuku evaverengi, senge maBookworms atakataura nezvake pakutanga kwechinyorwa chino, icho CHINOSHANDIRA kuverenga Linux Vakapindwa muropa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Maitiro Ekuchengeta Mapeji eWebhu ekuverenga Kwepamhepo nenzira Dzisiri Nyore
Ruben cigliutti akadaro
Ndatenda, zvakandishandira zvakakwana
Pindura Ruben Cigliutti